Rasaasa News – Ma dhici kartaa in R/wasaare Hailemariam Desalegn ka horyimid TPLF?
Ma dhici kartaa in R/wasaare Hailemariam Desalegn ka horyimid TPLF?
on May 15, 2014 3:07 pm
Su’aashaas ayay dad badan oo Itobiyaan ah isweydiinayaan, hasa ahaatee waxaa loo badinayaa inay dhab tahay arintaasi. Isbadal badan ayaa Itobiya ka guuxaya, waxaadna moodaa in Wayaane uu hadda noqday Ilka Doofaar oo la sahmiyay.
Shabakadda Somaliland Press ayaa laga xigtay in R/wasaare Hailemariam Desalegn uu mar kale isku taagay garabka ugu xooga badan siday u dhigeen ururka EPRDF ee matala Tigreega oo ah TPLF. Murankan ayaa ka dhashay bay tidhi shabakadda kacdoonka Oromada ee gobolka Oromiya, isagoo diiday habka loo laayay dadka shacabka ah.
Hailemariam, ayaa kasoo jeeda qabiil yar oo la yidhaahdo Welayta oon lahayn siday shabakadda u dhigtay awood cidian iyo mid siyaasadeed toona. Sida ay sheegayaan dadka xog-ogaalka ah 70% Jeneraalada ciidanka Itobiya waa Tigree inkastoo ay ka yihiin 7% dadweynaha Itobiya.
Waxay wararka sheegayaan sida ay qoratay shabakadda SLP ee laga soo xigtay wararkan, taliyayaasha ciidanka ayaa doonaya inay soo afjaraan banaanbaxyada ardayda inta aanay isu rogin rabshado, hasa ahaatee arintaa ayaanay go’aan siyaasadeed ka qaadanin madaxtooyada Arat Kilo (Waa qasrigii uu dhistay Minilik oo ah meesha uu dagan yahay R/wasaaraha).
Waxay intaa raacisay shabakadda in qabiilkan Welayat inkastoo ay yaryihiin hadana waxay si fiican uga dhex muuqdaan heerka dhexe ee taliyayaasha ciidanka iyo booliska. Hasa ahaatee, madaxda ciidanka ee TPLF-ta ayaa ku eedeeya R/wasaaraha Hailemariam Desalegn inuu u muuqdo nin jilicsan, iyadoo booliskii uu daalay ka dib banaabaxyada aan kala joogsiga lahayn ee socday dhowrka bilood. Dadweynaha ayaa cadhadooda wadooyinka la yimid ka dib intuu dhintay Meles.
Laga bilaabo 2013kii muslimiinta Itobiya ayaa ka waday magaalooyinka waaweyn banaanbaxyo, sidoo kale ayay xisbiyada mucaaradka ah iyaguna u qaban-qaabinayeen banaabaxyo iyadoo qaarkood aanay fasax u haysanin. Laakiin baanbaxyadan ugu dameeyay ayaa ka cadhoodeen saraakiisha TPLF sababtoo ah waxaa la ogaaday in ururka Oromada ugu jira EPRDF oo la yidhaahdo OPDO uu hoosta kala socdo banaabaxyada ay awadaan Oromada.
Hadda ka hor ayuu Meles Zanawi khudbad uu ka jeedinayay baarlamaanka kula kaftamay Oromada oo uu yidhi haddii la xoqo mudane OPDO ah waxaa ka soo baxaya OLF oo ah ururka mucaaradka ah ee u dagaalamaya madax banaanida Oromo.
Ila-wareedyada u waramay shabakadaha ayaa u sheegay in ay aad u adag tahay in markale loo doorto Hailemariam Desalegn jagada R/wasaaraha.